U-R300m wemali yomphakathi wasetshenziswa emngcwabeni kaMandela – umbiko – LIVE Express
Umbiko woMvikeli woMphakathi u-Adv. Busisiwe Mkhwebane usuve ukuthi imali elinganiselwa ku-R300million yomphakathi yasetshenziselwa ukukhokhela ezinye zezindleko zomgcwabo walowo owayenguMengameli wezwe waseNingizimu Afrika uNelson Rolihlahla Mandela.
NgoMsombuluko uMkhwebane ukhiphe umbiko obumayelana nophenyo obelwenziwa yihhovisi lakhe mayelana nezinsolo zokungasetshenziswa kahle kwezimali zomphakathi, ukungaphathi ngendlela kanye nokuphatha ngendlela enganakho ukwethembeka.
UMvikeli woMphakathi uthole ukuthi i-Eastern Cape Provincial Government (ECPG) yasebenzisa izimali ze-Eastern Cape Development Corporation (ECDC) okwakuhloswe ngazo ukuthuthukisa ingqalasizinda yomphakathi kodwa yasetshenziselwa izindleko zomgcwabo kaMandela.
Kulo mbiko kuphinde kwatholaka nokuthi yize noma uMengameli Jacob Zuma amemezela ngomhlaka-5 December 2013 ukuthi kuzoba nomgcwabo kahulumeni kaMandela ozosingathwa e-Eastern Cape, kodwa ayikho imali eyayibekwe eceleni yisifundazwe ukuze kukhokhelwe izindleko zalo mgcwabo.
UMvikeli woMphakathi uthi uNgqongqoshe wezeziMali, njengeNhloko yeHhovisi loMgcinimafa, akacele uMengameli ukuba enze isimemezelo zokuba i-Special Investigating Units and Special Tribunals Act ukuba iphenye phakathi, phakathi kokunye, ukusetshenziswa ngendlela engekho emthethweni kwezimali zomphakathi.